नम्बर वान हिरो को ? ~ The Nepal Romania
समकालिन नेपाली सिनेमामा नम्बर वान नायक को होलान ? एउटा बहसको विषय हुनसक्छ । यस्तै बहसको सुरुवात भएको छ जारी मेरोसिनेमा पपुलर अवार्डमा । सोमबारको संस्करणमा प्रसारित 'कर्म, आर्यन र हमालको' शीर्षक समाचारप्रति विश्वभरका मेरोसिनेमा भिजिटरहरुले थुप्रै संख्यामा कमेन्टहरु पोस्ट गरेका छन् ।मेरोसिनेमालाई प्राप्त तथा फेसबुकका भित्तोमा पोस्ट गरिएका त्यस्ता कमेन्टमा अधिकांशले अभिनेता राजेश हमालको प्रतिरक्षा गरेका छन् भने कतिपयले आर्यन र कर्मको । अनलाइन भोटिङमा हमाललाई 'फस्टलभ'स्टार कर्मले उछिनेपछि उनका फ्यानहरुले आश्चर्य, आक्रोश, विमती र टिप्पणी दर्शाएका छन् ।
जस्तै : ओमकुमारले लेखेका छन् -'नेपाली सिनेमामा राजेश हमालजस्तो स्टार कोही हुन सक्दैन । उनको तुलनामा आर्यन र कर्म बच्चा हुन् ।' कतिपयले कर्म र आर्यन दुवैलाई स्वयम भोट नगर्न सुझाएका छन् भने कतिपयले मान्छे खडा गरेर भोट नगर्न 'फस्टलभ' टीमलाई भनेका छन् । हमालको डिफेन्स गर्नेहरुले उनको बीसवर्षे करियरलाई मुख्य आधार मानेका छन् । कतिपयले भने नयाँपुस्ताका हिरोद्धय आर्यन र कर्मको पक्षमा कमेन्ट गरेका छन् । जस्तै : बसन्त भण्डारी लेख्छन् -'हमालको तुलनमा कर्म र आर्यन उत्कृष्ट छन् किनभने दुवैलाई अभिनय के हो र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । यी दुईले पुरानाले भन्दा नेपाली सिनेमा उद्योगलाई विकास गर्न सक्छन् । पहिला 'फस्टलभ' हेर्नुस र आर्यन तथा कर्म को हुन् टिप्पणी गर्नुस् ।' यो भर्चुअल युद्धमा कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यसका लागि जनवरी दोस्रो साता कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
मान्छे खडा गरेको छैन
मेरोसिनेमालाई प्राप्त कमेन्टबारे निर्देशक सिमोस सुनुवारले खण्डन जनाएका छन् । उनले अनलाइन भोटिङमा आफूले मान्छे खडा नगरेको दाबी गरे । 'मैले के पाउनु छ र मान्छे खडा गर्ने' सिमोसले भने 'ती सबै कमेन्ट वाहियात र झूठ हुन् ।' बरु निर्माता माधव वाग्लेले थाहा पाए मान्छे खडा गर्ने परिस्थिती बन्ने अनुमान उनले गरे ।